Muqdisho: Meelna dhimasho, meelna ciyaaro & nolol (Warbixin+ Sawiro ciyaar saaxib….) – SBC
Muqdisho: Meelna dhimasho, meelna ciyaaro & nolol (Warbixin+ Sawiro ciyaar saaxib….)
Ciyaar saaxibtinimo oo qeyb ka aheyd tartamada Isboorti ayaa ka dhacday garoonka School Polizio ee degmada Xamar Jajab, kaasoo ay isaga hor yimaadeen Kooxaha Kubada Cagta CCD iyo kooxda Geeska Afrika oo ka mid ah Kooxaha heerka 3aad ee Seria C-da. Kulankan ciyaareed oo ahaa mid xiiso lahaa ayaa labada kooxood soo bandhigay ciyaar farsamadeeda sareysa, waxaana daawadayaasha garoonka ay ahaayeen kuwo la dhacay hab ciyaareedka labada kooxood. Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa labada kooxo ay iska dhaliyeen min gool, waxaana qeybtaas ay ku kala nasteen bar bar dhacaas, hase ahaatee waxaa jiray fursado labada kooxood ee kala ah CCD iyo Kooxda kale ee Geeska Afrika ay iska qasaariyeen fursado. Labada kooxood ciyaartoyda ayaa labada dhinac u dagaalamayay sidii kooxba kooxda kale ay uga badin lahaayeen, waxaana weerarka labada dhinac isu adeegsanayeen ahaa mid ay ku raadinayeen goolka guusha.
Ugu dambeyn Kooxda Geeska Afrika ayaa waxaa u suura gashay in gool helaan, kaas oo u sahlay inay garoonka guul kala hoydaan, iyagoo ku badiyay 2-gool iyo gool, waxaana dadkii daawanayay ahaa kuwo u riyaaqay ciyaartan saaxibtinimo, waxaana ciyaartan ay qeyb ka tahay tartamada Isboorti ee si dhex galka bulshada
Si kastaba ha ahaatee Kooxda Kubada cagta ee CCD ayaa ka mid ah kooxaha heerka saddexaad ka ciyaara, iyadoo kooxda ay ka qeyb gasho tartamo kala duwan oo isugu jira Koobabka, iyo kuwa saaxibtinimo ee is balansiga labada kooxood, waxaana ciyaartoyda kooxda ay yihiin kuwo kaliya ee heerka 3aad ee hela taageero iyo daryeel, ku aadan sare u qaadida dhanka moraalka.
DAAWO SAWIRO DHEERAAD AH:
SBC International Muqdisho-Somalia